Affordable Power Wiricheya - Termobil Simba Wiricheya
simba mavhiripu kubva kuKarman Healthcare ndiyo sarudzo yakanakisa yekutenga.
Simba rakamira mavhiripu
Isu tinopa simba rakamira mavhiripu izvo zvinodzorwa neiri nyore kushandisa joystick.
Chinyorwa Chakamira mavhiripu
Isu tinopa kumira kwemaoko mavhiripu iyo inobvumira mushandisi kuchinjira munzvimbo yakamira.
Yakagadziridzwa Pressure Ruregerero
simba mavhiripu kupa kuvandudzwa kwekumanikidzwa kunoreva kushoma kudzvinyirira maronda, uye kunyaradza kwepamusoro musana.
Yakagadziriswa Ropa Kutenderera
simba mavhiripu kubva kuKarman Healthcare inopa kutenderera kweropa kuri nani kune vashandisi venguva refu.
Nderupi Rudzi rwe Simba Wiricheya Zvakandinakira?
simba mavhiripu ndiwo sarudzo yakanakisa yevashandisi vewheechair.
simba hwiricheya Features
Karman Healthcare inopa yakanakisa sarudzo ye simba mavhiripu. Maseya edu akamira emagetsi ari nyore kufamba, unogona kupinda nemusuwo uye dzimba. Karman simba hwiricheya dzakateedzana dzine huremu hunokwanisa hwe ". Isu tinopa magetsi mavhiripu iyo inokutendera iwe kuti umire, bhatiri rine simba cheya rinonunura torque uye kutonga kune nyore kukwira wakamira hwiricheya.
akamira mavhiripu kubva kuKarman Healthcare inopa mamiriro ehunyanzvi tekinoroji iyo inogona kuchinja zvinoshamisa upenyu hwako. Simba rakamira mavhiripu inoratidzira iri nyore kuwana rufaro-tsvimbo controller iyo inokutendera iwe kudzora kufamba kwechigaro. Rudzi urwu rwe hwiricheya inoratidzira yakamira simba mode, iyo inobvumira mushandisi kutyaira zviri nyore iyo hwiricheya ndiri panzvimbo yakamira.
Iyo yekufara-tsvimbo controller inokutendera iwe kudzora zviri nyore kumhanya kwechigaro, ichi mufaro-tsvimbo inoiswa zviri nyore mukati mekusvikira kwechero mhando yemushandisi. Nzvimbo dzechioko dzinogona kugadziriswa zviri nyore kureba kwemunhu, kuti zvinyatsoenderana nezvinodiwa nemuviri.
Magetsi Wiricheya - Wikipedia
Apparelyzed.com - Nongedzo kuMagetsi Mawiricheya
1-800 Wiricheya - Kumira Wiricheya
Spinlife.com - Yakamira Simba Wiricheya
Shermanoaksmedical.com - XO-202 Yakamira Wiricheya
Wayfair.com - Simba Rakamira Wiricheya